news – Page3– eratokhabar
सर्वविदितै छ– नेपालमा अहिले चलिरहेको सरकारलाई हामीले सामाजिक दलाल पुँजीवादी र फासिवादी भन्ने गरेका छौँ । यो सरकारलाई हामीले किन सामाजिक दलाल पुँजीवादी भन्यौँ ? किन यो फासिवादी हो ? यो भन्नुको पछाडिका सैद्धान्तिक, राजनीतिक एवम् आर्थिक कारणहरू के हुन् ? यसका बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ । सामाजिक दलाल पुँजीवाद भन्नुको कारण के हो […]
ढुङ्गाले छाएको पुरानो गोठ । गोठको तलामा साँघुरो आँटी । आँटी खचाखच छ र अगाडि झुन्डिएको छ एउटा ह्वाइट बोर्ड । अर्थात् ह्वाइट बोर्डमा लेखिएको छ, ‘माक्र्सवादका तीन सङ्घटक अङ्ग– दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद ।’ ओहो, कस्तो जटिल विषय । तर सकेजति फार्ने पर्नेछ यो विषय । बोर्डमा लेखिएका विषयलाई कमरेडहरूले गुन्द्रीमा बसेर […]
क्रान्ति आफैँमा एक पूर्ण शब्द हो जुन शब्दको अन्तर्यमा लुकेको महान् परिभाषा हो– आमूल परिवर्तन अर्थात् सम्पूर्ण रूपले जनअधिकार सुनिश्चित गर्नु । यही युगान्तकारी अभियानमा आजसम्म संसारमा लाखौँ क्रान्तिकारी योद्धाहरूले बलिदान गरिसकेका छन् । समाज विज्ञानका यिनै वीर–वीराङ्गनाको बलिदानले भरिएको छ– मानव समाजको इतिहास । त्यही इतिहासको जगमा उभिएका तिनका समकालीन क्रान्तिकारी उत्तराधिकारीहरूको काँधमा भोलिको […]
२०७६, १५ मंसिर आईतवार ०८:५२ December 1, 2019 ई-रातो खबर
काठमाडौँ : अमेरिकाले नेपाललाई भुटानको स्तरमा झार्दै भारतलाई खुसी पार्ने गरी ‘मिलेनियम च्यालेन्ज’ अन्तर्गत दिने भनिएको ५५ अर्ब सहयोगसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गर्न दबाब दिएको थियो । महरालाई उक्त काम नगरे पद धरापमा पारिदिने धम्की ३ महिनाअगाडि नै दिइएको थियो । निवर्तमान सभामुख महराले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । महराको कमजोर ठाउँ ढुकेर बसेका गुप्तचरहरूले उनलाई यौन […]
Back 12345 … 509 Onward